ဗဟုသုတ | Yangon Express | Page 2
ယောင်္ကျားလေးတွေ အတွက်ဒီလိုမိန်းမမျိုးတွေကို အထူးရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်.
By yangonexpress January 30, 2013 Leaveacomment
၁..။ ချစ်သူတို့သဘာဝ အပြင်ထွက်သွားလာစားသောက်တဲ့အခါ မြင်မြင်သမျှလက်ညိုးထိုးပူဆာတတ်တဲ့မိန်းမ။ (ရှိသမျှပြောင်လိမ့်မည်..။မတတ်နိုင်သောအခါသင်ကျန်ရစ်ဖြစ်လိမ့်မည်..။ ) ၂..။မိမိထက်လှသူ ဘေးကများဖြတ်လျှောက်သွားသောအခါချစ်သူကောင်လေးက မသိမသာဖြစ်စေ၊သတိလက်လွတ်၍ သိသိသာသာကြီးဖြစ်စေ လိုက်လံငေးမောကြည့်မိသောအခါလူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် ဆွဲဆိတ်ထုနှက်ရိုက်ပုတ်တတ်သောမိန်းမ..။(အရှက်ကွဲလိမ့်မည်..။ လူ့အခွင့်အရေးဆူံးရှုံးသွားသည်ဟုသင်မကြာခဏခံစားရလိမ့်မည်) ၃..။ နေရာဒေသမရွေး၊လူသူလေးပါးမရှောင်လွန်ကဲစွာ ချိုအီချွဲနွဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်သောမိန်းမ (အစပိုင်းကာလတွင်မတော့သင့်အတွက်သာယာကောင်းသာယာနာပျော်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်.။သို့သောကြာလေကြာလေ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလေ၊သူစကားလာပြောမှာကိုတောင်သင်စိုးရွံလာလိမ့်မည်..၊မူးချင်သလိုအန်ချင်သလိုလိုခံစားလာရလိမ့်မည်) ၄..။သင့်စကားတစ်လုံးအားဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်တွေးကာအခဲမကြေတစ်နုံ့နုံ့နှင့်သတိရလျင်ရသလိုစကားနာထိုးနားကိုနှိပ်စက်တတ်သောမိန်းမ (သင်ဘယ်လောက်ရှင်းပြရှင်းပြ ။ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်ကာ သင်ပဲတိုင်ပတ် တစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်ချော့ ရလိမ့်မည်) ၅..။သင်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါတ်ိုင်းသူမအကြောင်းထက်သူတစ်ပါးအကြောင်းကိုဟုတ်တာရောမဟူတ်တာပါ တစ်တွတ်တွတ်ပြောတတ်သောမိန်းမ ( ဆက်လက်လက်တွဲပါက စကားရှုပ်တတ်သောသူမအတွက် သင်ရှေ့နေကောင်းကောင်း လိုအပ်လာပါလိမ့်မည်) ၆..။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် ပွဲကြည့်ရန် Live show ပွဲတွေကြည့်ရန်ဝါသနာအလွန်ပါသော်လည်း စာဖတ်ရန် လုံးဝ ဝါသနာမပါသောမိန်းမ (သင့်နံဘေးမှာရှိသောအမျိုးသမီးလေးသည် မည်မျှပင်ချောမောလှပနေစေကာမူ စာဖတ်နည်းသည့်အတွက် အပေါ်ယံရွှေမှုန်ကြဲအထဲကနောက်ချေးခံ အလှမျိုးသာဖြစ်လိမ့်မည်..။ ) ရ..။တစ်နေ့တာဖြစ်ပျက်သမျှ.၊အိပ်ရာထမှအိပ်ရာဝင်သူမမည်သူနှင့်မည်သည့်စကားပြောသည်မည်သည့်အရာစားသည်.။ တစ်နေ့တစ်နေ့မရိုးသောပြဿနာပေါင်းစုံအား သင့်စိတ်အခြေအနေကိုမမေး သူချည်းသာတစ်တွတ်တွတ်ပြောတတ်သောမိန်းမ ( အဓိပါယ်ကတော့ မျှဝေခံစားသည်ဟုမည်သော်လည်းမလိုအပ်သောကိစ္စတော်တော်များများကိုနေ့စဉ်ကြားလာရသော […]
တကယ်တော့ ဒီပုံတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ၂၆ လောက် ကတည်းက ရိုက်ထားတာ မေမြို့ မီးပုံးပျံပွဲမှာ ပွဲ ဈေးတန်းထဲကအရက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ မောင်ညီသစ် ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထားတာ ဘာမှ မဟုတ်ပဲ ဖွ တယ်ထင်မှာ စိုးလို့ရယ် မှတ်မှတ်ရရ လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စ ပေါ်လာပြီး ဦးဇင်းတွေထိကြ ခိုက်ကြ ဖြစ်ကြလို့ အဲ့ဒီက ဦးဇင်းတွေအတွက် အားနာလွန်းလို့မတင်ရက်လို့ ဒီတိုင်းသိမ်းထားတာ ဒီရက်ပိုင်း ဘားအံက အမျိုးဘာသာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကြီးရဲ့ ဓာတ်ပုံ မနက်မနက် မြင်လိုက်ရရင် လုပ်ကွ ချထည့်လိုက်ကွ ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရေးထားကြတာတွေ အားပေး အားမြှောက် လုပ်ကြတာတွေကို သောက်မြင်ကပ် လာလွန်းလို့ တင်လိုက်တာ အဲ့ဒီနေ့က ည […]
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ကိုယ်ဘယ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျမယ် ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ ရမလဲ ဆိုတာကအစတွက်လို့ ရတယ်အင်စတောလုပ်ပြီးရင်ခုနှစ်သက္ကရာဇ်လေးထည့်ပေး ရုံနဲ့ စုံနေအောင်တွက်လို့ ရတယ်ကွန်ပျုတာဗေဒင်ပါ ၀ါသနာပါသူများနဲ့ ဗဟုသုတရ ရလိုသူတွေဆောင်ထားသင့်ပါတယ်ကဲဆွဲထားမယ်နော်……. အောက်မှာDownload ယူပါ.. အိမ်ထောင်ကျမကျတွက်တဲ့ဗေဒင်ဆော့ဝဲ http://www.zwmnna.com/2011/04/blog-post_8637.html
လှချင်ရက် စက်စက်ယို’ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နောက်ကွယ်က ဆိုးကျိုးများ။
လှချင်လွန်းအားကြီးလို့သာ ပင်ဆယ်ဟီးအမြင့်ကြီးကို စီးထားရပေမယ့် ခြေသလုံးကြွက်သားတွေကတော့ နာကျင်မှုဒဏ်ကို အလူးအလိမ့်ခံနေရပါတယ်။ မိန်းမသားတို့ သဘာဝအရလူအများရဲ့ လှလိုက်တာလို့ ချီးကျူးပြီး ငေးမောတာခံချင်လို့သာ ဟန်မပျက်နေရပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်လို့ နားချိန်ရောက် ရင် ခြေထောက်တောင် မထောက်နိုင်လောက်အောင် နာကျင်တဲ့ဒဏ်ကို အလူးအလိမ့် ခံစားရတော့တာ ပါပဲ။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်အမြင့်စီးပြီး လှလှပပကြွကြွလျှောက်နိုင်တာကို မက်မောလှတဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှပါဘူး။ ဒီလို လှပစမတ်ကျမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က အကျိုးဆက်တွေကလည်း များလွန်းလှပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန် ထားပြောင်းသွားပြီး အရပ်မြင့်ချင်လို့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးကြတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကားပေါ်ကဆင်း ဆယ်လှမ်းလောက်လှမ်း ကားပေါ်ပြန်တက်ဆိုတာချည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အလွှာစုံ၊ အဆင့်စုံ ပါဝင်ကြပါတယ်။ လှပမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က အကျိုးဆက်လေးတွေကိုလည်း သိထားစေချင်ပါတယ်။ ပင်ဆယ်ဟီးစီးတာရဲ့အကျိုးဆက်လေးများ ပထမအဆင့်ကတော့ အလွယ်တကူ ချော်လဲပြီး ဒူးနာ၊ ခါးနာနဲ့ အခန့်မသင့်ရင် […]
၁။ ကြက်ဥနှင့် ကြက်သား အမိုင်နိုအက်စစ်တွေက ဆံပင် သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းတွေ ပါပဲ။ ပရိုတင်းဓာတ် များများရအောင် အသား၊ ငါး၊ ကြက်သား၊ နို့နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေ၊ ပဲနို့၊ ဥအမျိုးမျိုး စတာတွေ စားပေးပါ။ ကြက်ဥမှာ များစွာပါဝင်တဲ့ ဘိုင်အိုတင်နဲ့ ဗီတာမင်ဘီ- ၁၂ က ဆံပင်၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်းနဲ့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ကြီးထွားစေပါတယ်။ ၂။ ငါးနှင့် အိုမီဂါ- ၃ မပြည့်ဝဆီဖြစ်တဲ့ အိုမီဂါ- ၃ အဆီတွေက ဆံပင်နဲ့ အရေပြားကို ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေပါတယ်။ အိုမီဂါ- ၃ အဆီကို ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ဆာဒင်းငါး စတဲ့ ငါးတွေနဲ့ သစ်ကြားသီး၊ မိကျောင်းကွမ်းဖတ်နဲ့ ပဲပိစပ်တွေကနေ […]
ကျိန်စာသင့်ထားတဲ့ တောင်ကုတ်မြို့ကို မသွားကြပါနဲ့
ရန်ကုန်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲကို ပြေးဆွဲတဲ့ အောင်သစ္စာယာဉ်လိုင်းက ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကား တစီး ဒီနေ့ မနက်အစောပိုင်းက တောင်ကုတ်မြို့အနီးမှာ မတော်တဆ တိမ်းမှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကားပေါ်ပါတဲ့ ခရီးသည်အနည်းဆုံး ၁၄ ဦး သေဆုံးပြီး ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်၊ အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ လက်ထက်မှာ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို သတ်ဖြတ်မိ ခဲ့လို့ ကျိန်စာသင့်ပြီး၊ ကပ်ဆိုက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲဒီကပ်ဘေးကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် အလောင်းမင်း တရားကြီးက မှန်စီရွှေချ ဗလီတွေ ဆောက်ပေးခဲ့ရတယ်။ အခုလည်း အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ် ဆယ်ဦးကို မတရား ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက် အဲဒီမြို့ဟာ ကျိန်စာသင့်ခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ မြို့ကို ဘေးဥပါဒ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကျရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုသူများ […]
ယနေ့ခေတ်အထိ တွေ့မြင်နေရသော ဂျိန်းဘုန်းကြီး၊ သီလရှင်များနှင့် တရားပွဲကျင်းပပုံများ
ဂျိန်းဘုန်းကြီး ဟု ဆိုလိုက်လျင် မြန်မာလူမျိုးအများစုသည် အ၀တ်မ၀တ် Naked ဖြစ်သော၊ မုတ် ဆိတ်မွှေး၊ ပါးသိုင်းမွှေးဗလဗျစ် နှင့် အသားမည်းမည်း ဆာဒူးကြီးများကို မြင်ယောင်မိကြ ပေလိမ့်မည်။ မှန်ပါသည်၊ သို့ပါသော်လည်း အ၀တ်ဝတ်သော ဂျိန်းဘုန်းကြီးများ၊ အ၀တ်မ၀တ်သော ဂျိန်းဘုန်းကြီး များ ဟု ဂိုဏ်းနှစ်မျိုးရှိနေသည်။ စာရေးသူတို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်စဉ်မှာတော့ မသိချင်လို့ မရ၊ ကင်းလို့ မရသော ဘုန်းတော်ကြီးများ ဟု ဆိုရပါမည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်္ကန်းဝတ်ကို မြင်ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ၀န္ဒာမိ ဘန္တေ – ( အရှင်ဘုရား ရှိခိုးပါတယ်ဘုရား) ဆိုပြီး နဖူးပေါ်လက်အုပ်ချီသွားသူများ၊ နာမ ဆကာရေး၊ နာမ ဆကေး ဆိုပြီး စာရေးသူတို့လက်ကို တို့ထိပြီး သူတို့ နဖူးကို […]